Basanta Basnet: March 2012
साहित्य सम्मेलनको उद्घाटन सत्र सकिएलगत्तै आख्यानकार किशोर नेपालसँग मैले गरेको संवार्ता 'किशोर नेपालसँग ६० मिनेट' तीन दिनभरि चर्चित रह्यो। धेरैले रुचाएको सो सत्रको केही समालोचकबीच तिखो आलोचना पनि भएको थियो। पाँच सेग्मेन्टमा बाँडिएको सो वार्ताका केही अंश यहाँ प्रस्तुत छ :
Posted by Basanta Basnet at 5:55 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 3:15 AM No comments:
यस वर्षको मदन पुरस्कार महिलाको कृतिले पाउन सफल भयो। झमक घिमिरेको 'जीवन काँडा कि फूल' पारिजातपछि व्यापक चर्चा र मदन पुरस्कार दुवै पाउने किताब दोस्रो किताब भइदियो।
अहिलेसम्म पनि महिला लेखक भन्नेबित्तिकै पारिजातको नाम झुन्डिन्छ धेरैको मुखमा। साहित्यको व्यापक बहसमा वानिरा गिरिको नाम लिने पनि छन्।
वर्षेनी नयाँ नयाँ महिला लेखक आइरहन्छन् तर तिनको प्रचार र प्रभाव उति स्थापित हुन सकेको छैन।
पछिल्ला वर्षमा महिला लेखकको संख्या बढ्दो छ। यति हुँदाहुँदै पनि आम गुनासो छ– हामीलाई लेख्ने वातावरण र प्रोत्साहन छैन।
वातावरण पाउनु भनेको के हो? लेख्ने, साहित्य गोष्ठीमा भाग लिने 'स्वतन्त्रता' पाएका महिला किन अझै पनि पुरुषको दाँजोमा पुग्न सकेका छैनन् त?
Posted by Basanta Basnet at 4:24 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 4:14 AM No comments:
इलाम क्याम्पसमा मध्यरातसम्म कवि गोष्ठी हुँदै थियो। प्रकाशपथमा एक्कासि आगलागी भयो। लेखक र पाठकको भीड गोष्ठी छाडेर आगो निभाउन हुर्रियो। साहित्य गोष्ठीका सहभागी संयोगले जागै थिए। नत्र इलाम उबेलै जलेर सखाप हुन्थ्यो।
कुरा २०४५ वैशाख ३१ गतेको हो।
इलाम बजारमा आगलागी हुनु नियमित आकस्मिकता जस्तै भएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भयो। आकस्मिकताहरूको सहर इलाममा पाँच दशकयता सुरु साहित्य सम्मेलनको परम्पराले फागुन १४ गते आइतबारदेखि तीन दिनसम्म निरन्तरता पायो।
Posted by Basanta Basnet at 3:16 AM No comments: